९ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीको आविष्कार, महिलामाथि हिंसा भए स्यान्डलबाट प्रहरीलाई फोन ! - नमुना पोष्ट
९ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीको आविष्कार, महिलामाथि हिंसा भए स्यान्डलबाट प्रहरीलाई फोन !
नमुना पोष्टप्रकाशित मिति: २०७६ भाद्र १९, बिहिबार (२ साल अघि)
विश्यव्यापी रुपमा नै अहिले महिलामाथि हुने योनजन्य सिंहाका घटना बढ्दै गइरहेको छ । बलात्कार, हत्या र सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टका घटना बढ्दै गइरहेको देखेर ९ क्लासमा पढ्ने एक विद्यार्थीले महिलाको सुरक्षाका लागि एउटा नयाँ प्रविधिको आबिस्कार गरेका छन् ।
भारतको बिलासपुर बस्ने कृष्टि जर्ज एन्थोनीले महिलाको सुरक्षाका लागि एक चप्पल (स्यान्डल) बनाएका छन् । उनले यस्तो स्यान्डल बनाएका छन्, जसबाट महिलाले आफू असुरक्षित भएको महसुस गरे आफू नजिकको व्यक्तिलाई करेन्टको झट्का दिन सक्छिन् ।
यो स्यान्डलमा एक बटन हुने छ, जसलाई दवाउँदा सिधै प्रहरीलाई फोन लाग्ने छ । प्रहरीले जीपीएस सिस्टमको मद्दतबाट लोकेसन पत्ता लगाएर आपतमा परेकी महिलाको उद्दार गर्न सक्छ ।
धेरै दिनदेखि पत्रिकामा महिलामाथि हुने योनजन्य घटनासँग सम्बन्धित समाचार पढेपछि कृष्टिको दिमागमा यस्तो आइडियो आएको बताइएको छ । त्यसपछि उनले महिलालाई सुरक्षित बनाउन सकिने उपकरणको निर्माण गर्ने सोच बनाए ।
अन्नतः उनले स्यान्डल बनाएका छन् । जसका लागि उनलाई ७ सय रुपैयाँ मात्रै खर्च लाग्यो ।
प्रविधि सम्बन्धि थप
एमाले अध्यक्ष ओली विद्युतीय बस चढेर लुम्बिनी
२८ सय रुपैयाँमा किनेको कचौराले चम्कियो यी व्यक्तिको भाग्य